Endrika Mpandika Teny: Jade Dussart, i Azia Sy Ny Zon’olombelona Ao Am-pony · Global Voices teny Malagasy
Endrika Mpandika Teny: Jade Dussart, i Azia Sy Ny Zon'olombelona Ao Am-pony
Voadika ny 07 Janoary 2018 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, English, Español, Français
Ilay mpandika tenin'ny Global Voices amin'ny teny frantsay nandritra ny fihaonana #GV2017. Sary avy amin'i Suzanne Lehn
Ry zareo (lahy sy vavy) no manao ny fiainana andavanandron'ny tranonkalan'i Lingua an'ny Global Voices. Mamorona vondrona marobe misy faravodilanitra sy toerana fonenana maro isan-karazany ireo mpandika tenin'ny Global Voices amin'ny teny frantsay. Mitondra azy ireo, ho an'ny sasany, amin'ny fomba misesy, mankany amin'ny kaontinanta maromaro ny diany. Mba hihaonana amin'izy ireo ”IRL”, any amin'ny tontolo tena izy, dia tsy maintsy mandeha ihany koa indraindray : Noho ilay Fihaonana Global Voices, ilay fihaonana erantanin'ny Global Voices izay misy isaky ny roa taona, ary natao tao Kolombo, Sri Lanka vao teo, no nahafahanay nifampiresaka nivantana tamin'i Jade Dussart, izy mizara amintsika eto ny hafanampony.
Global Voices (GV): Tantarao anay ny antony nanosika anao hiditra ho ao amin'ny ekipan'ny mpandika tenin'ny Global voices amin'ny teny frantsay – ary ny niverina tao indray taorian'ny taona maromaro?
Jade: Niditra tao amin'ny ekipan'ny GV amin'ny teny frantsay aho fony mbola nianatra tao amin'ny Oniversite misahana ny teny tao Aix-en-Provence. Nilaza ny GV ho toy ny loharano azo atokisana mba hahazoana vaovao mikasika an'i Azia ny mpampianatro iray (mbola tamim-panaovana lisansa-nà teny Shinoa sy Koreana aho tamin'izany). Vao nahatsikaritra ilay fizaràna ”Hiaraka aminay” aho, tonga dia tsy nisalasala. Tamin'ny martsa 2011 izany. Nikaroka fomba mba hirotsahana amin'ny zavatra iray manan-danja amiko aho ary mba hampidirana traikefana filatsahana an-tsitrapo ao amin'ny CV-ako. Niovaova ny fahavitrihako nandritra ireny taona maro ireny, fa tsy tena niala tao amin'ny Global Voices mihitsy aho. Tsy afaka nandika na inona na inona aho nandritra ny taom-pianarako tany Shina satria voasivana ilay tranonkala.
GV: Manana safidy miavaka ho an'ny lahatsoratra momba an'i Azia ianao (indrindra i Shina). Fa maninona ? Ary nanova ny fahazoanao ireo firenena ireo ve ireny lahatsoratra ireny ?
Jade: Eny, mihevitra aho fa rehefa manadihady tsara ny fandikako nandritra ireo enina (efa ho fito!) taona farany, lahatsoratra roa na telo ihany no miresaka momba ny faritra hafa ankoatran'i Azia. Faritra tena mahaliana ahy io, nanokanako ny fianarako ary ankehitriny mandrafitra ny faritra iavahako manokana, amin'ny maha-mpikaroka ahy momba ny zon'olombelona. Efa nipetraka tany Shina sy Atsimon'i Korea aho ary tena voasarika tanteraka tamin'ny kolontsainan'i Azia Atsimo (mozika sy sarimihetsika). Mifantoka kokoa amin'ny lohahevitra mifandray amin'ny zon'olombelona ny lahatsoratra adikako. Izany hoe, fomba iray ihany koa izany ho ahy, mba hanaovana fanarahamaso ny toe-javatra momba ny zon'olombelona any amin'ny faritra, fa ihany koa mba hizara ireny trhay ireny amin'ny vahoaka miteny frantsay, izay tsy voatery hahafantatra ny zavatra miseho ao Azia.
GV: Vao niatrika ilay Fihaonana 2017 an'ny Global Voices ianao. Ahoana no nahaterahan'ny fanapahankevitrao hanoratra anarana tao ?
Jade: Rehefa naheno aho fa misokatra kokoa noho ireo taona lasa ny dingana fandraisana anjara, nanapaka hevitra ny tsy hamela fotsiny ity fahafahana malalaka ity aho ary nametraka ny fangatahako, mba tsy hanenenana. Tsy maintsy nanandrana aho ! Tena nilalao betsaka tao anatin'izany ihany koa ny fanaovana ilay Fihaonana tao Sri Lanka, eo anivon'ny faritra iasako. Liana tamin'ny fihaonana amin'ireo mpikatroka Sri-lankey sy Maldiviàna aho, izay fantatro fa marobe ao Kolombo, ary ihany koa ny fiarahamonina Global Voices, izay efa misy ahy nanomboka tamin'ny 2011 ka tsy mbola nahitako mpikambana mihitsy na iray aza ! Tena nirehareha be aho nahita ny anarako ho anisan'ireo voafidy !
GV: Inona no teny ho safidianao mba hamaritana ity zava-niseho ity ?
Jade: Ho ahy manokana, somary nitovy tamina fitsaboana ity Fihaonana ity. Fanazarantena hahatoky tena, tsy mora foana rehefa voadidina olona samy mahaliana avokoa, izay nandia lalana mahatalanjona, ady feno herimpo, tetikasa misy famoronana. Tena nanita-tsaina be ilay Fihaonana amin'izay fijery iray izay, satria tena tonga saina aho tamin'ny niresahako tamin'ny rehetra fa GVers maro no mijaly noho io soritraretina mpamitaka io, na inona na inona mombamomba azy ireo ! Nahafahako nametraka fifandraisana lalindalina kokoa tamin'ny GVers maro hafa izany, feno fihetseham-po lalina tokoa.
GV: Nitondra tetikasa, faniriana vaovao avy tamin'ity Fihaonana ity ve ianao ?
Jade: Ny faniriana hanomboka hanoratra ho an'ny Global Voices no nentiko tany anaty entako, natosik'i Sahar [Sahar Habib Ghazi, lehiben'ny mpanonta lahatsoratra ao amin'ny Global Voices] Gwen [Gwenaëlle Lefeuvre, mpiara-mamoaka ny lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny frantsay] ary i Lova [Lova Rakotomalala, mpanonta lahatsoratra amin'ny faritra miteny frantsay]. Faniriako ihany koa ny mba ho tafiditra amin'ny fampivoarana ny Advox – izay mifandray mivantana amin'ny asako fiarovako ny zon'olombelona – ary indrindra ny tetikasany Threatened Voices.
GV: Mba lazalazao kely aminay mombamomba ny asa aman-draharahanao. Ahoana no hidiran'ny fiasanao ho mpandika teny amin'ny GV ao anatin'izany ?
Jade: Vao nahavita fifanarahana tamin'ny ONG Front Line Defenders ao Dublin aho, izay niasako toy ny mpikaroka momba ny toe-draharaha misy ireo mpiaro ny zon'olombelona ao Azia. Nanomboka tamin'ny faran'ny fianarako tamin'ny 2015, nihodinkodina teny anivon'ireo ONG maro misahana ny ”zon'olombelona” aho toy ny Reporters Sans Frontières na ny Miara-mihetsika ho an'ny Zon'Olombelona, asa izay tena tiako. Ny fandikako teny, dia tena tsy azoko lavina aloha, fa miankina kely amin'ny vesatry ny asako any am-piasana mandritra ny herinandro. Tao anatn'ny volana vitsivitsy izay, tena feno loatra ny androko ka tsy nijery ny Global Voices raha tsy ho loharano ho an'ny fikarohana ataoko aho. Fa am-piandrasana ny hahita asa indray, mikasa ny hanohy ny maha-mpandika teny ahy aho, ary maninona koa moa raha tsy hanomboka asa ho mpanoratra !